အခမဲ့များအတွက်ဘလူးတုသ် GPS စနစ် | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ဘလူးတုသ် GPS စနစ်
ဘလူးတုသ် GPS စနစ် APK ကို
ပြင်ပဘလူးတုသ် NMEA သဟဇာတဂျီပီအက်စ်ကိရိယာချိတ်ဆက်ပါ။ လှောင်ပြောင် provider ကအခြားအက်ပ် device ကိုအတူလုပ်ကိုင်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
### အစဉ်မပြတ်ငါစသည်တို့ ... Mac အတွက်, သူတို့ရဲ့ Notebook သို့မဟုတ် PC ချိတ်ဆက်ဖို့ဒီ app ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ဘယ်လိုမေးခွန်းများကိုလက်ခံရရှိသည်။ ငါဒီ app များ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဟာ android ရဲ့ပြည်တွင်းရေး GPS စနစ် "ကိုအစားထိုး" နိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ပကဘလူးတုသ်ဂျီပီအက်စ်ကိရိယာနှင့်အတူက Android device ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ကြောင်းကိုရှင်းလင်းဖို့ရှိသည်။
samsung devices များသည် @@@@@ @@@@@
ရံဖန်ရံခါသင့်ရဲ့ device ကိုလေယာဉ်ပျက်ကျမှုလျှင်, app ကိုအသုံးမပြုမီအတွင်း GPS စနစ်ပေါ်တွင်ပထမဆုံးအလှည့်စိတ်တော်။ ဒါဟာအချို့ samsung devices များနှင့်အတူလူသိများပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။
### app ကို frontend အဓိကအားဖြင့်ထိန်းချုပ်နှင့် configuration ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အချို့သောနေရာလေးကိုအချက်အလက်ကိုပေးဘို့, ရုံ frontend ကြောင်းကိုနားလည်ပေးပါ။ ဒါကြောင့်များစွာသောလုပ်ငန်းဆောင်တာရှိပါတယ်တိုင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြသထားတယ်ဆိုလိုချင်သောပုံစံ ... စသည်တို့အတွက်မျှော်လင့်ထားပါဘူး။
**** ပထမဦးဆုံး **** ပြင်ဆင်မှုအားအတွက်ကဲ့ရဲ့တည်နေရာများ Allow ကို enable ပေးပါ
* အားလုံး device ကို + app များကို pls ငါ့ကိုအသေးစိတ်ကိုအီးမေးလ်ပို့, အလုပ်လုပ်အာမခံလို့မရပါဘူး🙂
အခုဆိုရင်သင်ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ထုတ်လွှင့်ရည်ရွယ်ချက်ပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်အခြားအက်ပ်အနေဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုရပ်တန့် / start နိုင်သည်
ရပ်တန့် - googoo.android.btgps.action.SERVICE_STOP
* မှတ်ချက်: သင်ဟာပထမဦးဆုံးအသေချာသငျသညျ setup ကိုလူအပေါင်းတို့သည်ဦးစားပေးလုပ်သင့်ပါတယ်သင် GUI ကို frontend မှတဆင့်မှန်ကန်စွာန်ဆောင်မှုစတင်နိုင်ပါသည်။
ပျက်ကွက်လျှင် * ချိတ်ဆက်ဖို့ (preference ကိုမှာ) ပြသနာကိုကျော်လွှားနိုင်စေရန်ကြိုးစားကြ (service ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကျရှုံး, ဥပမာ, connection ကိုငြင်းဆန်ခဲ့သည်)
သငျသညျ FC အသင်းသို့မဟုတ်မည်သည့်ပြဿနာများတယ်လျှင်မည်သည့်အမှားမက်ဆေ့ခ်ျများ, nmea မှတ်တမ်း၏မျက်နှာပြင်ဦးထုပ်နှင့်အတူ, အမှားသတင်းပို့သို့မဟုတ်ငါ့ကို logcat ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
[android version ကို x ကိုမိုဘိုင်းဟာ့ဒ်ဝဲ x ကိုဘလူးတုသ် GPS ဟာ့ဒ်ဝဲ] ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ပေါင်းစပ်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဟာ့ဒ်ဝဲမော်ဒယ်အပေါ်ထောက်ခံမှုပေးမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဝမ်းနည်းပါတယ်။ တောင်မှတစ်ဦးက GPS-တစ်ဦးကမိုဘိုင်း-တစ်ဦးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်, ဒါပေမယ့်ဂျီပီအက်စ်-တစ်ဦးကမိုဘိုင်း-B ကအတူအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေ, သို့သော်မိုဘိုင်း-B ကဂျီပီအက်စ်-B ကအတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သို့သော် android version ကိုအဆင့်မြှင့်ပြီးနောက်, ဒီပေါင်းစပ်တော့ဘူးအလုပ်မလုပ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်အခြားပေါင်းစပ်နောက်တဖန်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အစဉ်မပြတ်ငါထိုကဲ့သို့သောအစီရင်ခံစာများတယ်။ ငါမဆိုသူတွေကို hardware ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ပင်ထိုသူအချို့တို့သည်အဘို့ငါအရင်ကမကြားဖူးသူတို့ကိုအကြောင်းကိုမဆိုသတင်းအချက်အလက် google လို့မရပါဘူး။ သငျသညျကိုနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
လက်ရှိ CURRENT VERSION: 1.2.1
ANDROID တောငျး: 2.1 နှင့်တက်
Network ကိုအင်ဖို II ကို
ဒီဇင်ဘာလတွင် 14, 2013 မှာ 11: 30 နံနက်
အောင်တဲ့အခါမှာဘလူးတုသ်နှင့် ဆက်စပ်. ရလဒ်ကိုဒီအမှားနှင့်အတူပြဿနာ "ကွန်နက်ရှင်ဝန်ဆောင်မှုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုပျက်ကွက်ပျက်ကွက်" ဖြစ်ပါတယ် GPS ??
အောက်တိုဘာလ 12, 2013 မှာ 12: 21 နံနက်
ဇူလိုင်လ 22, 2013 မှာ 9: 26 ညနေ
သငျသညျ app ကို run နေလျှင်ကိုယ့်, it.Because မပွုနိုငျအလွန် much.But ကျေးဇူးတင်ပါသည်, အကြှနျုပျ၏ GPS stoped.Please ထိုသို့ပြုမှဘယ်လောက်ငါ့ကိုအကြံပေးချင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာလတွင် 14, 2013 မှာ 11: 22 နံနက်
အောင်သောအခါအဘလူးတုသ်နှင့် ဆက်စပ်. ရလဒ်ကိုဒီအမှားနှင့်အတူပြဿနာ "ကွန်နက်ရှင်ဝန်ဆောင်မှုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုပျက်ကွက်ပျက်ကွက်" ဖြစ်ပါတယ် GPS ??